EBESIMTHANDA KODWA USESISHIYILE: UMaalim Seif Sharif Hamad (1943-2021) | Scrolla Izindaba
EBESIMTHANDA KODWA USESISHIYILE: UMaalim Seif Sharif Hamad (1943-2021)
Akasekho emhlabeni kodwa iphupho liyaqhubeka
Iphupho likaMaalim Seif Hamad kwakungukubona iziqhingi zakhe azithandayo zase-Zanzibar eseziphenduke i-Dubia of Africa, indawo engaphesheya kwezilwandle yezomnotho ophithizelayo waseMpumalanga ye-Afrika.
Waba nombono mayelana nokuhlukana kwendawo yase-Tanzania, izwe elenziwa ngokushesha ngowe-1964 ngesikhathi kuhlanganiswa isizwe esikhulu sase-Tanganyika neziqhingi ezincane zase-Zanzibar.
Ubevelele kwezepolitiki zase-Tanzania, engumngani nozakwabo odume ezweni uJulius Nyerere, ngesikhathi eyisishoshovu sobuzwe base-Zanzibari.
Wayemele intando yeningi futhi eyindoda eneqiniso, okuyisici esasenza udinge ukubekezela ezweni lezepolitiki lase-Tanzania.
Ezalelwe esiqhingini sase-Pemba, waphinde waba yingxenye yomvikeli waseBrithani e-Zanzibar, waba nguthisha yingakho wayehlale ebizwa ngoMaalim.
Ubeyilungu loMkhandlu Wezinguquko wase-Zanzibar ngemuva kwenkululeko futhi waba yilungu lekomidi eliphakathi nokuhlelwa kwezomnotho kweqembu elibusayo lase-Tanzania, i-CCM, phakathi kowe-1977 nowe-1987 ngaphambi kokuba abe nguNgqongqoshe Omkhulu wase-Zanzibar.
Waxoshwa eqenjini elibusayo ngemuva kokuphikisana nentando yeningi yamaqembu amaningi futhi waboshwa iminyaka emibili nohhafu phakathi kowe-1989 nowe-1991 ngaphambi kokuba uNyerere avume ukuqeda umthetho owodwa weqembu e-Tanzania ngowe-1992.
UHamad kanye namanye amalungu eqembu elibusayo basungula iqembu eliphikisayo i-Civic United Front Party okuthi noma benqobe ukhetho oluyisithupha olwaqondana phakathi kowe-1995 nowe-2020 ngesikhathi benqatshelwe ukunqoba – lokho kwakungukwesaba eqenjini elibusayo ukwehluleka ukulawula.
Wayengumuntu othandekayo, ikakhulukazi e-Pemba, lapho ayeshumayela khona njalo ngokungabi nodlame nokubuyisana.
Muva nje, okhethweni lwangoLwezi ngowe-2020, amalungu eqembu likaHamad, iqembu le-ACT-Wazalendo, adutshulwa, amanye afakwa ejele , ananye ashaywa kanti futhi waphoqeleka ukuba abe yiPhini likaMengameli kuhulumeni wobumbano lukazwelonke.
Kwakudingeka abhekane nenselele entsha ngokushesha. UMengameli wase-Tanzania uJohn Magufuli ukuphikile ukuba khona kwe-Covid e-Tanzania, yize bekusobala ukuthi baningi abantu ababulawa yileli gciwane.
UMagdale ugweme umvalelo, wehlise isithunzi sokubaluleka kokuqhelelana komphakathi kanye nokugqokwa kwezifonyo, wavimbela ukukhishwa kwemininingwane futhi wenqaba nokuthola imijovo yokugoma. Unxuse ukuthi kuthandazelwe amakhambi ukuze kunqotshwe leli gciwane.
UHamad walaliswa esibhedlela mhla zi-9 ngemuva kokuthi yena nonkosikazi wakhe betholakele bene-Covid.
Ushone ngoLwesibili, kanti iphupho lakhe le-Zanzibar eliphumelelayo kwezomnotho nentando yeningi liseyindlela esekude ukufezeka.
Kodwa-ke watshala imbewu ngekusasa elihlukile futhi isibonelo sakhe sokubekezelelana kanye kanye nokuba isulumane kwaba ugqozi ezwenikazi lonke kanye nasendaweni yase-Indian Ocean.
UTundu Lissu, obemele iqembu eliphikisayo okhethweni lwangoLwezi ngowe-020, wathi ngaye: “Iminyaka yokuboshwa, ukuqulwa kwecala lokuvukela umbuso, ukuhlukunyezwa nobunzima obungachazeki akuzange kumphule. Ngokuphakama okuphezulu kakhulu nokwehla okungenamkhawulo, uziphakamisile izifiso zezwe lase-Zanzibar.”